यस्तो देश, जहाँ आफ्नो छोरीसँग बिहे गर्न कानुनले छेक्दैन! – PathivaraOnline
Home > अन्तराष्ट्रिय > यस्तो देश, जहाँ आफ्नो छोरीसँग बिहे गर्न कानुनले छेक्दैन!
यस्तो देश, जहाँ आफ्नो छोरीसँग बिहे गर्न कानुनले छेक्दैन!
admin November 20, 2021 अन्तराष्ट्रिय, समाज 0
विश्वमा यस्ता कैयौ देशहरु छन, जो आफनो अनौठो–अनौठो कानुनलाई लिएर सधै चर्चामा आइरहन्छन् । यस्तै देशहरु मध्येको देश हो ईरान, जहाँ यस्तै–यस्तै अनौठा –अनौठा कानुन छ, जसको बारेमा जानेर मानिसहरु अचम्ममा पर्दछन् । यहाँ मानिसहरुलाई कैयौ प्रकारका प्रतिबन्धहरु लगाइएको छ, जसको बारेमा सायदै पनि तपाई जान्नुहुन्छ होला ।
– यो देशमा महिलाहरु स्टेडियममा गएर पुरुषहरुको खेल हेर्न सक्दैनन् । साथै यहाँ हिजाब नलगाउने महिलालाई २ महिनाको जेलको सजाय हुन्छ ।
– यहाँ महिलाहरुले टाइट पाइन्ट लगाउनु उपराधको श्रेणी मानिन्छ । साथै यहाँ यो पनि कानुन छ कि महिलाहरु आफनो श्रीमानले चाहेको बेला यौ ‘न सम्पर्क गर्नको लागी मनाहि गर्न सक्दैनन् ।
– ईरानमा महिलाहरुले गैर–पुरुषहरुसँग हात मिलाउनु अ’परा’ध हो । यदि महिलाले कुनै सँग हात मिलाएको पाइएमा उसलाई पक्राउ गरीन्छ । पछिल्लो बर्ष ईरानकी महिला भलीबल टिमले ग्लोबल च्यालेन्ज टुर्नामेन्टकी अन्डर–२३ को फाइनल जीतेका थिए, तर महिला खेलाडीहरुले जित पछि पनि पुरुष टिम कोचसँग हात मिलाउन सकेनन् । कोचले खेलाडीहरुसँग एउटा क्लिपबोर्ड द्धारा हात मिलाएर जितको खुशी साटेका थिए ।
– ईरानमा केबल पुरुषलाई मात्र डिभोर्सको अधिकार दिइएको छ । यहाँ महिलाहरुलाई यो हक छैन कि उ पुरुषसँग डिभोर्स माग्न सकुन । यसको अलावा पतिको मञ्जुरी बिना यहाँ महिलाहरुलाई काम गर्न पनि प्रतिबन्ध छ ।
– यहा सडकमा उभिएर गित गाउनुलाई अ’परा’ध मानिन्छ । साथै, यो देशमा टाई लगाउन पनि प्रतिबन्ध छ ।
– यहाँ पिता आफनो छोरीसँग पनि विवाह गर्न सक्छ । २०१३ मा ईरानमा यो कानुन पास भएको थियो, जस अन्तर्गत कुनै पनि पिता आफनो धर्मपुत्रीसँग विवाह गर्न सक्दछन् तर यसको लागी छोरीको उमेर कम्तिमा १३ बर्ष हुनुपर्दछ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा यस्तो अचम्म! शंका लागेर कट्टु खोलेर प्रहरी नै चकित!
युट्यूवेकै कारण पीडितले गाँस, बास र उपचार पाएको भन्दै यसरी एकाएक खनिए रमेश प्रसाई (भिडियो हेर्नुस्)